About Us - Kutendeseka Import & Export Trade Co., Ltd.
Main dzinokwanisa zvikamu
Flat vanofa nokuveza Machine
Okudhindira ufe nokuveza Machine
Professional chemarata bhodhi dzaFord
Sticky bhokisi Machine
Cangzhou Chengyi katoni Machinery Co., Ltd. vanoshandiswa fekitari ari nyanzvi mune achifa nokuveza michina pamwe kutsvakurudzwa, kubudirira, mukugadzira uye vachitengesa. By insiting kune refu zvinangwa "kutora michina sezvo aizotangira, chigadzirwa unhu sezvo chinoumba", isuwo kushongedza yazvino kubudiswa kushanda midziyo pamwe yepamusoro achifa nokuveza michina, izvo inounza zvikuru zvoupfumi purofiti kuti vatengi vedu.
By Ramba Uchifambira uye innovating, isu akazadzisa yedu muchina yokutevedzera, nani muchina unhu hwedu, uye akawedzera musika yedu zvishoma nezvishoma. Takapiwa paakavapa ne "Anodiwa Enterprise mu Hebei Province"
"Product Quality Inspection" "ari Product Quality akavimbisa Company". Sezvo yakasimbiswa, tine mashoko ISO9001: 2008 International Quality Certificate uye CE Certificate nokuda European Union, izvozvo zvinoita mukuru nemazvo, yakakwirira rakadzikama uye yakakwirira kunyatsoshanda Michini edu.
Ruijie dzino kufa nokuveza michina vakanyorwa trademarks se "Ruijie" uye "Hengsheng". Kunosangana kutsanya-kuchinja musika yose uye kukura zvinodiwa vatengi edu, Ruijie kambani inoronga nyanzvi R & D chikwata uye kunyatsoomerera Q & C chikwata, isu kunyatsoteerera duku mashoko, funga sezvo mutengi, regai kuva mutengi, uye edza zvatinogona kugadzira hwakanakisisa michina uye kuti rakavimbika shamwari makasitoma edu.
Radial Arm Saw, Corrugated Board Line Speed sei Zvakawanda , Cut Off Vakaona , Corrugated Board Equipment ,